Bhaibheri rinotizivisa kuti Noah akanga akarurama, achifamba nenzira dzaifadza Mwari, asingatevedzi huipi hwakanga huzere munyika. Nokuda kwehuipi uhwu Mwari vakaita chitsidzo chokuti vaizoparadza Pasirose nemafashamo emvura - vachiponesa Noah nemhuri yake. Pakaitika mafashamo emvura iyi, kwakapona vanhu vanomwe (8) vanoti: Noah nemukadzi wake; vanakomana vaNoah vainzi Shem, Ham naJaphet; uye vakadzi vakanga vakaroorwa nevanakomana vaNoah.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguva_yaNoah&oldid=68052"
This page was last edited on 16 Nyamavhuvhu 2019, at 16:10.